Welcome To Exorcism WoW (EMWGN)
Exorcism WoW သည် Beta State အတွင်းဖြစ်သောကြောင့် အခမဲ့ကစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ExoLounge / Geo Notes
« Last post by exoblux on February 25, 2013, 08:25:07 am »
Characteristics of Urban Fringes
(1) Superstores and retail packs
(2) Industrial estates (area of modern light and service industries)
(3) Business parks (offices, accomodation and leisure activities)
(4) Science parks (usually close toauniversity or research centres (high-tech industries) and quatermary activities.
FIG7Lines Skip
The changing location of manufacturing.
The great major of the world
ExoLounge / Bio Notes
« Last post by exoblux on February 25, 2013, 08:22:21 am »
Fertilization and Fruit Formation.
If the flower is to produce seeds, pollination has to be followed byaprocess called fertilization.
In all organisms, fertilization happens whenamale sex cell and female sex cell joined together.
The cell which is formed by this fusion is calledazygote and develops into an embryo of an animal oraplant. These sex cells are called gametes.
Fertilization : The male and female gametes fuse to form zygote, which grows intoanew individual . For fertilization to occur, male cell nucleus from pollen grain has to reach the female nucleus off egg cell in the ovule and fuse with it.
Fertilization divides many times
Animal -> Sperm+Egg(Ovum) ---> zygote -----> embryo -> an new individual animal
Plant -> Pollen + Egg(Ovule) ---> ----> zygote -> plant embryo ->anew individual plant
Fertilization showing pollen tube.
The pollen grain absorbs liquid from stigma andapollen tube grows out of the grain.
This tube grows down style and into the ovary where it entersasmall hole (micropyle), in an ovule.
The pollen nucleus travels down the pollen-tube and enters the ovule.
Here, it combines with egg nuclues. Each ovule in an ovary needs to be fertilized byaseparate pollen-grains.
Fruit & Seed Formation
After pollen an egg nuclei have fused, the egg cell divides many time sand produceaminiature plant called an embryo.
Embryo consists ofatiny root (radicle) and shoot with two special leaves called cotyledons.
In dicot, food made in leaves of parent plant is carried in the pholem to the cotyledons.
The cotyledons grow so large with stored food that they completely enclose the embryo.
In monocots, food store is laid down inaspecial tissue called endosperm, which is outside the cotyledons.
The outer wall of ovules becomes thicker and harder and forms seed-coat (festa).
As seeds grow, ovary becomes much larger and it is now calledafood. Petals and stamens shrivel and fall of. A fruit is also calledafertilized ovary.
Game-Play Guides / Game Guide Contents
« Last post by exokool on February 09, 2013, 02:22:09 am »
GAME GUIDE CONTENTS
ဒီအောက်မှာ ကျွှန်တော် သူ့ Category နဲ့သူ အသုံးဝင်သော Guide အများစုကို တင်ပေးထားပါတယ်... နှစ်သက်၇ာ Guide ကို Click လိုက်ပါ... Hyperlink ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..
Vault of Archavon Guide (10 Men)
Trial of the Crusader Guide (10 Men Normal)
Icecrown Citadel Guide (10 Men Normal)
Obsidian Sanctum Guide (Full Guide)
Game-Play Guides / Love Is In The Air Guide
« Last post by souldunk on February 09, 2013, 02:17:32 am »
Love Fool Title and Achievement Guide
Love Fool Title အတွက် လိုအပ်တဲ့ Achievement တွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီပွဲတော်ရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ Love Token တွေကို စုဆောင်းရပါမယ်။ ဒီ Love Token တွေနဲ့ Achievement တွေကို ဆက်လုပ်သွားရမှာပါ။ Love Token ကို Daily Quest နေ့စဉ်တစ်ခုမှ Token ၅ ခု၊ King ၄ ယောက်စီ Lovely Charm Bracelet ပြန်အပ်တဲ့ Quest ၄ ခုက Love Token 20 စုစုပေါင်း တစ်နေ့ ၂၅ ခုပုံမှန်ရပါမယ်။
Lovely Charm Bracelet ကို ရဖို့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ A gift for
Game-Play Guides / Obsidian Sanctum Guide
« Last post by souldunk on February 09, 2013, 02:13:41 am »
Obsidian Sanctum က Dragonblight က Wyrmest Temple ၇ဲ့အောက်ဆုံးထပ်မှာ၇ှိတာပါ... အောက်ဆုံးထပ် အပေါက်ဝနှင့်တည့်တည့် Instance ဖြစ်ပါတယ်...
Obsidian Sanctum (Nightfall Dungeon) မှာ... 25 Mode and 10 Mode ဆိုပြီးနှစ်ခု၇ှိပါတယ်...
25 Mode အောင်၇င်... Twilight Vanquisher ဆိုတဲ့ Title ၇ပါတယ်...
10 Mode အောင်၇င်... of the Nightfall ဆိုတဲ့ Title ၇ပါတယ်...
10 Man -3Tank,2Healer &5DPS။ ဟီလာတစ်ယောက်က ဘော့စ်တန့်ကို သီးသန့်ဟီး။ တခြားတစ်ယောက်က ရိတ်တစ်ခုလုံးကို ဟီးပါ။
25 Man -3Tank,3Healer & 19 DPS။ ဟီလာတစ်ယောက်က ဘော့စ်တန့်ကို သီးသန့်ဟီး။ တခြားနှစ်ယောက်က ရိတ်တစ်ခုလုံးကို ဟီးပါ။
အရင်ဆုံး ဒန်ထဲဝင်ဝင်ချင်း တဖက်တချက်မှာရှိတဲ့ ခရိတွေ ၂ အုပ်ကို ရှင်းထားလိုက်ပါ။ Hunter Pet, Warlock Pet များကို သိမ်းခိုင်းပါ။ သူတို့တပည့်တွေက ဆင်းမလာသေးတဲ့ နဂါးပေါက်တွေကို အတင်းပြေးခေါ်လို့ တပြိုင်ထဲ နဂါးပေါက် ၃ ကောင်နဲ့ နပန်းလုံးရပြီး အကုန်သေဖူးတယ်။ ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်တဲ့ မျောက်တွေကို မီးထဲမဆင်းပါနဲ့လို့ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း သတိပေးပါ။ ချော်ရည်တွေထဲမှာ မီးလေပွေတွေရှိတယ်.. တချက်လေး သွားထိလိုက်မိရင် ပွဲပြီးပြီ... အဲ့လေပွေတွေက တစ်ယောက်မကျန် အကုန်လိုက်ကန်တာပါ။
BossTank & Tank Healer ကလွဲပြီးတော့ ကျန်တဲ့သူတွေဟာ အထက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့ အစိမ်းရောင်လိုင်းနောက်ဘက်မှာပဲ နေရမယ်။ Drake Tank မယ့် ၂ ယောက်ထဲမှာ ပထမတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးဆင်းလာတဲ့ Drake (Tenebron) နဲ့ တတိယမြောက်ဆင်းလာတဲ့ Drake(Vesperon) တို့ကိုခေါ်ပြီး အစိမ်းရောင်လိုင်းနောက်မှာ တန့်ဖို့ တာဝန်ပေးရမယ်။ ဒုတိယတန့်တစ်ယောက်ကျတော့ ဒုတိယမြောက်ဆင်းလာတဲ့ Drake(Shadron) ကိုခေါ်ပြီး အစိမ်းရောင်လိုင်းနောက်မှာ လာတန့်ခိုင်းပါ။ Drake ၃ ကောင်လုံး မသေမချင်း ဘော့စ်နားကို တခြားသူတွေ မသွားပါစေနဲ့။
BossTank ကျတော့ အထက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့ အမည်းရောင်နေရာကို တန့်ခိုင်းပါ။ ဘော့စ်ဟာ ဘေးတစ်စောင်းဖြစ်နေရမယ်၊ ဒီဘက်ကို ခေါင်းလှည့်မနေရဘူး၊ အမြီးလှည့်မနေရဘူး။ အစိမ်းရောင်ရေပြင်ညီမျဉ်းလိုပဲ ဘေးတိုက်ဖြစ်နေရမယ်။ BossTank healer ကိုတော့ ပုံမှာရပ်နေတဲ့ ပရစ်နေရာမှာပဲ နေခိုင်းပြီး ဟီးခိုင်းပါ။ Drake ၃ ကောင်လုံး သေပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ အစိမ်းရောင်တန်းနေရာကို အကုန်လုံးသွားပြီး ဘော့စ်ကို ၀ိုင်းချရမယ်။
အရင်ဆုံး Boss Tank က ဘော့စ်ကိုခေါ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာကို ခေါ်လာလိုက်ပါ။ တန့်ဟီလာက ဟီးထား။ တခြားသူတွေ ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်ပဲနေ။ ပထမဆုံး နဂါးပေါက်တစ်ကောင်ဆင်းလာတာနဲ့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ ပထမတန့်က သွားခေါ်လာခဲ့ပါ။ အကုန်ဝိုင်းချ။ ဒုတိယ နဂါးပေါက်ဆင်းလာရင် တာဝန်ပေးထားတဲ့ ဒုတိယတန့်က သွားခေါ်လာခဲ့ပြီး တန့်ထားပါ .. ပထမနဂါးပေါက်သေတာနဲ့ ဒုတိယနဂါးပေါက်ကို ၀ိုင်းချ။ တတိယနဂါးပေါက်ထပ်ဆင်းလာရင် ပထမတန့်က သွားခေါ်လာပြီး တန့်ထား၊ ဒုတိယနဂါးပေါက်သေတာနဲ့ တတိယနဂါးပေါက်ကို ၀ိုင်းချ။ ၃ ကောင်လုံးသေပြီဆိုရင် ဘော့စ်ဆီကို အကုန်သွားပြီးချပါ။
Drake Fight မှာ သတိထားရမယ့်အချက်များ - Drake Tank တွေက ဆင်းလာတဲ့ နဂါးပေါက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားခေါ်လာရမယ်။ တန့်ကလွဲပြီး တခြားသူတွေအနေနဲ့ Drake တွေကို နောက်ကပဲ ချပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရင် Shadow Breath မိပြီး အသက်ထွက်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် ချနေတုန်းပေါ်လာတတ်တဲ့ Shadow Fissure (အမည်းရောင်စက်ဝိုင်းကွက်) တွေကိုရှောင်ပါ။ ပျော်ပြီးရပ်နေရင် ရှောပါမယ်။ နောက်သတိထားရတာက နောက်ဆုံးနဂါးပေါက်(Vesperon) ကိုချနေတုန်း အဲ့ကောင်ကတခါတလေ Twilight Torment Buff ကို ကိုယ်တွေပေါ်လှမ်းတင်တတ်တယ်။ အဲ့ဒါ အတင်ခံရတဲ့အချိန် သူ့ကိုချရင် ချတဲ့ကောင် Shadow Damage ထိပါတယ်။ ပျော်ပြီးတော့ Twilight Torment ဘပ်ဖ်ကြီးနဲ့ တမုန်းတီးလိုက်ရင် တီးတဲ့သူအကုန်အသက်ထွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Twilight Torment တင်ခံရပြီဆိုရင် (အကယ်၍သတိမထားမိလိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ချတာနဲ့ ကိုယ့်သွေးဘလိုင်းကြီးလျော့လာတယ်ဆိုရင်) မချပါနဲ့တော့။ Autoattack နဲ့တောင် မချဘဲရပ်နေပါ။ ဟီလာက နိုင်အောင်ဟီးထား။ အဲ့ဘပ်ဖ်ပျောက်တော့မှ ဆက်ချပါ။
ဘော့စ်ကို ချတဲ့အခါ နောက်ကမချဘူး၊ ရှေ့က မချဘူး၊ ဘေးကပဲ ချပါ။ တစ်ခုသတိထားဖို့က ဘော့စ်ကိုချနေတုန်းမှာ Lava Waves တွေက ရှေ့ဘက်ကရော နောက်ဘက်ကရော တက်လာပါတယ်။ Lava Waves တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ နေရာလွတ်တွေ ရှိတယ်။ အဲ့နေရာလွတ်ဆီကို ဘော့စ်တန့်ကလွဲပြီး တခြားသူတွေ ၀င်ပြေးပါ။ Lava Waves တွေကို မရှောင်ဘဲ ပျော်ပျော်ကြီးရပ်နေရင်တော့ ရှောမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Fire Summon တွေလည်း ထွက်ပါတယ်။ အဲ့ကောင်တွေက Lava Waves နဲ့ထိရင် အကောင်ကြီးပြီးကြမ်းလာပါတယ်။ အဲ့ကောင်တွေပါ တန့်တွေက ဘော့စ်နားကိုခေါ်စုပေးပြီး AOE damage တွေနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်ပါ။ ဘော့စ်က Fire Breath Casting ဆွဲရင် ၀ိုင်းဖျက်ပါ။ Drake3ကောင်မရှိတော့တဲ့ Sartharion ဟာ ဒန်မီသာသာပါပဲ ... Berserk time လည်းမရှိတဲ့အတွက် Lava Waves တွေရှောင်မယ်၊ Fire Breath ဖျက်မယ်၊ ဘေးကနေရိုက်မယ်၊ ကိုယ်မသေအောင်နေပြီး စိမ်ပြေနပြေနဲ့ ဘောစ့်ကို ရိုက်သတ်လိုက်ပါ။
ALL GOOD LUCK AND HAVE FUN!
Game-Play Guides / Lunar Festival Guide
« Last post by souldunk on February 09, 2013, 02:10:06 am »
ကဲ ပွဲတော်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ Elder တိုင်တယ်လေးတွေလဲ လိုချင်ရောပေါ့။ ဒီတော့ achievement တစ်ခုချင်းစီနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရအောင် Elder တွေရဲ့ locations တွေ အဓိကထားပြောသွားပေးမယ်။
coin of Ancestry တစ်ခုကို ယူခိုင်းတာပါ။ လရောင်လေးကျနေတဲ့ Elder ဆီမှာ quest complete နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ ပြီးရင်5coins, 10 coins, 25 coins နောက်ဆုံး 50 coins အဆင့်ဆင့် စုသွားရမှာပါ။ title အတွက်လိုတာက 50 coins ပါ။
Home city တွေမှာ ရှိတဲ့ lunar festival vendor တွေကနေ red's rocket cluster ၁၀ ခုကို ၀ယ်ပြီး ၂၅ စက္ကန့်အတွင်းပြီးအောင် ဖောက်ရမှာပါ။ ၀ယ်ပြီး ဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Vendor ဆီကပဲ Festival Fire Cracker ၁၀ ခုကို ၀ယ်ပြီး ၃၀ စက္ကန့်အတွင်း အပြီးဖောက်ရမှာပါ။ ဒါလဲ အပေါ်ကလိုပါပဲ။
Moon Glade မှာရှိတဲ့ vendor ဆီမှာ ancestry coins ၅ ခုနဲ့ ၀တ်စုံတစ်စုံကို ၀ယ်ရမှာပါ။ နေရာကတော့ Moonglade night heaven နားမှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ၀တ်စုံကို အရောင်ပုံစံရွေးပြီး ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Achievement အတွက် ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ မြို့တော်တွေကနေ The Lunar Festival ဆိုတဲ့ quest ကို လုပ်ရပါမယ်။ lunar festival area က quest giver တွေကို စကားပြောခိုင်းတာပါ။
သူတို့က ထပ်ပြီး Lunar Fireworks ကို ထပ်ပေးပါမယ်။ ဗျောက်အိုးတွေ ၀ယ်ပြီးဖောက်ခိုင်းတာပါ။ အဲ့ဒီ quest ပြီးရင်တော့ Valadar Starsong ကိုပေးပါမယ်။ Moonglade Night Heaven ကို သူပေးတဲ့ teleport စာရွက်သုံးပြီး quest အပ်ခိုင်းတာပါ။ teleport လုပ်တာက အရင်နှစ်ကကော အခုကော မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Moonglade ကို ၉၆၉၃ နဲ့သွားပါ။ ပြီးရင် quest အပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီမှာ ထပ်ပြီး Elune's Blessing quest ကို ထပ်ပေးပါမယ်။
ဒီ quest ကတော့ Omen ကို သတ်ခိုင်းတာပါ။ ရေကန်ကြီးဘေးမှာပဲရှိပါတယ်။ quest ယူထားတဲ့အတွက် omen ကို summon ရမယ့်နေရာကို ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် Omen နေရာကိုသွားပြီး Invitation က စာရွက်ကိုသုံးရင် Omen ထွက်လာပါပြီ။ သူ့ကို သတ်ပြီးရင် အလင်းတန်းကြီး ကျလာပါမယ်။ အဲ့ဒီအလင်းတန်းအောက်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့။ Elune's Blessig Acheivement ကို ရပါမယ်။ ဒီအချိမန့်အတွက် Omen ကို ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သူ့ကို သတ်ပြီး ကျလာတဲ့ အလင်းတန်းကို ဖြတ်လျှောက်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Elder of Kalimdor
သူခိုင်းထားတဲ့ Ancestry coins တွေယူရုံပါပဲ။ ပုံနဲ့ပြချင်ပေမယ့် များလွန်းလို့ နေရာတွေကို coordinate နဲ့ပြထားပါတယ်။
Bladeleaf the Elder 56,60 at Dolanaar (Teldrassil).
Starweave the Elder 49,19 at Lor'danel (Darkshore)
Stonespire the Elder 60,50 in Everlook (Winterspring)
Brightspear the Elder 53,57 in the Ruins of Lake Kel'theril in Winterspring
Nightwind the Elder 37,53 in Jaedanar (Felwood)
Riversong the Elder 35,48 in Astranaar (Ashenvale)
Skygleam the Elder 65,79 at the Ravencrest Monument (Azshara)
Moonwarden the Elder 48,59 in the Crossroads (Northern Barrens)
Windtotem the Elder 68,70 in Ratchet (Northern Barrens)
Runetotem the Elder 54,44 in Razor Hill (Durotar).
Bloodhoof the Elder 48,53 in Bloodhoof Village (Mulgore).
Mistwalker the Elder 63,31 in the Dire Maul complex (Feralas)
Grimtotem the Elder 76,37 in Feralas
Skyseer the Elder 45,48 at Freewind Post (Thousand Needles)
Elder Morningdew 77,75 on the speedbarge (Thousand Needles)
Dreamseer the Elder 51,27 in Gadgetzan (Tanaris).
Ragetotem the Elder 36,80 in Tanaris (outside Uldum).
Thunderhorn the Elder 50,76 in Slithering Scar (Un'Goro Crater)
Primestone the Elder 31,13 in the Crystal Vale (Silithus)
Elder of Eastern Kingdom
Graveborn the Elder 61,53 in Brill (Tirisfal Glades).
Meadowrun the Elder 65,38 in the Western Plaguelands
Moonstrike the Elder 69,73 in Caer Darrow (the island with Scholomance, Western Plaguelands)
Windrun the Elder 35,68 in the Eastern Plaguelands
Snowcrown the Elder 75,52 at Light's Hope Chapel (Eastern Plaguelands).
Highpeak the Elder 50,48 in the Hinterlands
Obsidian the Elder 45,41 in The Sepulcher (Silverpine Forest)
Silvervein the Elder 33,46 at Thelsamar (Loch Modan)
Goldwell the Elder 46,51 at Kharanos (Dun Morogh).
Ironband the Elder 21,79 in Searing Gorge
Dawnstrider the Elder 64,23 at Flame Crest (Burning Steppes)
Rumblerock the Elder 82,46 at Dreadmaul Rock (Burning Steppes).
Stormbrow the Elder 40,63 at Goldshire (Elwynn Forest).
Skychaser the Elder 56,47 at Sentinel Hill (Westfall)
Bellowrage the Elder 54,49 at the Dark Portal in the Blasted Lands.
Starglade the Elder 71,34 outside Zul'Gurub (Stranglethorn Vale)
Winterhoof the Elder 40,72 in Booty Bay (Stranglethorn Vale)
Elders of the Northend
Elder Sardis (Borean Tundra, Valiance Keep) [59,66]: Outside of Valiance Keep.
Elder Pamuya (Borean Tundra, Warsong Hold) [43,50]: Outside of Warsong Hold.
Elder Arp (Borean Tundra, D.E.H.T.A Camp) [57,44]: In the camp.
Elder Northal (Borean Tundra, Transitus Shield, Coldarra) [34,34]: In Transitus Shield.
Elder Sandrene (Sholazar Basin, River's Heart) [50,64]
Elder Wanikaya (Sholazar Basin, Rainspeaker Rapids) [64,49]: Near Freya
Elder Bluewolf (Lake Wintergrasp, Wintergrasp Fortress) [49,14]: Inside of the fortress, your side MUST control it.
Elder Morthie (Dragonblight, Star's Rest) [30,56]
Elder Skywarden (Dragonblight, Agmar's Hammer) [35,48]
Elder Thoim (Dragonblight, Moa'ki Harbor) [49,78]
Elder Graymane (Storm Peaks, K3) [41,85]
Elder Fargal (Storm Peaks, Frosthold) [29,74]
Elder Stonebeard (Storm Peaks, Bouldercrag's Refuge) [31,38]
Elder Muraco (Storm Speaks, Camp Taunka'lo) [64,51]
Elder Tauros (Zul'drak, Zim'Torga) [59,56]
Elder Beldak (Grizzly Hills, Westfall Brigade Encampment) [61,28]
Elder Whurain (Grizzly Hills, Camp Onequah) [64,47]
Elder Lunaro (Grizzly Hills, Ruins of Tethys) [81,37]
Elders of Dungeon
Splitrock (Maraudon): Go to where Rotgrip is located.
Wildmane (Zul'Farrak): Go to where Gahz'rilla is spawned (near the pools) and it's in the southeastern corner.
Eastern Kingdom Dungeons
Morndeep (Blackrock Depths): Go to the Ring of Law, you'll need to do the starting event first.
Stonefort (Lower Blackrock Depths): Near the entrance where the rope bridges.
Farwhisper (Stratholme): In Festival Lane
Starsong: (Temple of Atal'Hakkar): In the room with the dragons.
Jarten (Utgarde Keep): After Prince Keleseth.
Ghogan'gada (Utgarde Pinnacle): After Skadi the Ruthless.
Kilias (Drak'Tharon Keep): Inside of King Dred's pen.
Ohanzee (Gundrak): Inside of the room with Eck.
Igasho (The Nexus): Near Ormorok.
Nurgen (Azjol-Nerub): In the pool after Hadronox.
Yurauk (Halls of Stone): In the cave with Krystallus.
Undercity, Ogrimmar and Thunder Bluff မြို့သုံးမြို့က Elders တွေဆီမှာ သွားယူရမှာပါ။
Danarsssas, Stormwind နဲ့ Ironforge က Elder တွေဆီကနေ coins တွေ ယူရမှာပါ။
လိုတာ ကျန်ခဲ့တာ ရှိရင်ပြောပေးကြပါ။
Announcements, Events and GM Lists / GM List
« Last post by exoblux on February 06, 2013, 11:15:28 am »
ဒါကတော့ ExoGM List ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
GM များအား Level 1, Level2and Level3ခန့်ပေးထားလျှက်၇ှိပါတယ်...
GM Level3(Administrators + Global Moderators + Old Serviced/Special Ranked Game Masters)
1. ExO-Blux -> Piranha, Coolbabe
2. ExO-Ariez -> Ariez, Lucix
3. ExO-Kool -> Kool, Orionkool (Currently On Leave)
GM Level2(Moderate Serviced Game Masters)
1. Crucidez -> Crucide, Krucike
2. Reaper -> Shadowreaper, Firereaper
GM Level 1 (New Game Masters)
There are Currently No Level 1 Game Masters Yet...
GM Recruitment Is Currently Available in Exo-WoW! Why Not Send Some Application PMs to ExO-Blux and ExO-Ariez!
Game-Play Guides / Vault of Archavon (10 Men Normal)
« Last post by exoariez on February 06, 2013, 07:25:34 am »
Vault of Archavon 10 Men Normal *Beginners Guide*
2 Healers and2Tanks Required (Off-Tanks Best If Tank Talented [Not DPS Talented Melee Tanks])
Tank ကို တစ်ယောက် Heal
Boss က မီးမှုတ်တယ်အေးဆေး
ကျန်တဲ့ Healer က Raid ကို Heal ပါ
နောက်တော့ Frost ကောင်ကိုချပါတယ်
ဒီ Boss က Frozen Orb ထုတ်တယ် (Whiteout လိုပေါ်ပါတယ် Casting ဆွဲ၇င်... In DeadlyBoss Mod...)
ထုတ်ရင် Tank , Healer နဲ့ Range တွေက Frozen Orb
နဲ့ဝေးရာကိုသွား DPS တွေက Frozen Orb ပဲ ရိုက်
Boss က ဒီ Spell ပါပဲ
Frozen Orb ကို DPS မပေးနိုင်ရင်သေမှာပါ သွေးက 150K
Frozen Orb ကိုက Stun လို့လည်း၇ပါတယ်.. Paladin များလည်း.. Repentance စမ်းကြည့်ပေါ့.. ၇မ၇မသေချာလို့ပါ.. ကျနော်လည်း Paladin မကိုင်ဖူးလို့ပါ
နောက် Boss က မြေကြီး
သူ့Spell က အချွန်နဲ့စိုက်တာပဲ
Tank နဲ့ချနေတုန်း ချက်ချင်းကိုယ်ဘက်လှည့်လာပြီဆို
အဲနေရာမှာမနေပါနဲ့တော့ သူလက်ကအချွန်တွေနဲ့ အဲ့နားကို စိုက်လိုက်မယ်
ကျန်တာကတော့ DPS ပါပဲ
နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့Lightning ဆိုသွားပါတယ်
အဲ့ Boss မှာဖြူကာပြာကာစိုက်တော့တာပဲ
Need DPS ကြမ်းကြမ်းတွေ
Boss ဘေးမှာ လေးကောင်ရှိတယ် 123K လောက်
Main Tank က Boss Tank DPS တွေက AoE နဲ့ချ
AoE တော့အရမ်းမချနဲ့ Boss ပဲမဲချ
Healer က နိုင်အောင် Heal ဘေးကကောင်တွေကို တစ်ယောက်က
Tank Hunter , Mage , Shaman ပါရင်ပိုကောင်းမယ် သူတို့ က Main Boss ပဲချ
Melee က ဘေးကကောင်တွေမြန်မြန်ရှင်း
Range က Boss ကို DPS ပေး
Lightning Cast Boss ဆွဲရင်ဖျက်ပါ မဖျက်ရင် 16K
Wishes You Guys For A Successful Raid After Reading This.. Best of Luck!
Game-Play Guides / Trial of the Crusader (10 Men Normal)
« Last post by exoariez on February 06, 2013, 07:14:49 am »
Trail of the Crusader 10 Men Normal Guide (For Beginners)
လိုအပ်သော Class များ
Paladin (Need2For Buffs and Auras)
ခေါ်လို့ ရသော Class များ
2 Tanks (Main Tank DK (Better if Blood) or Protection Warrior), Off-Tank (DK oraProtection Paladin)
2 Healers (Holy Priest and Restoration Druid)
Buff တင်ကြ All Ready ဆို ဘေးကကောင်ကိုစကားပြောလိုက် တစ်ယောက်က(Leader ပဲပြောပါ)
Boss တွေချပြီးတ်ုင်း ဘယ်သူမှ သွားမပြောပါနဲ့ Leader က All Ready မှပြောပါ
First Boss (Magnataur)
Warlock Fear ပေး Druid ချုပ် (ကျွန်တော်တို့ တုန်းက Moonkin Druid ပါတယ်)
All DPS ပေးပါ Boss က Summon တယ်
Summon ရင် AoE နဲ့ရှင်းပါ မများပါဘူး ၂ ကောင်လောက်ပဲ
Second Boss (Beast2ကောင်)
သူက နှစ်ကောင်ဗျ Deadscale ဆိုတဲ့ကောင်ကိုချ နောက်တစ်ကောင်ကို
Hunter Sleep လို့ ရတယ် Poison ကွင်းချတယ် ရှောင်ပါ
Damage ကြမ်းတယ် Poison ကွင်းက Deadscale ကသေခံနီးကျရင်
မြေကြီးထဲဝင်သွားတယ် ဒါဆိုနောက်တစ်ကောင်ရိုက် ခဏနေ ပြန်ပေါ်လာတယ်
ဒါဆို ပထမကောင်ရိုက် သေရင် နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကောင်ရိုက်ပါ
Third Boss (Ice Howl)
ထွက်လာတာနဲ့ Fear ပေး Druid ချုပ် All DPS
Fear မလွတ်စေနဲ့ လွတ်သွားတာနဲ့ သူက Spell သုံးတယ်
ချနေတဲ့ကောင်အားလုံးကိုကန်လိုက်တယ်အဲချိန် Stun တယ်3Seconds လောက်
Charge တိုက်တယ် Charge တိုက်တာဝင်ရင် Berserk ပွင့်ပြီး
တစ်ချက်ခုတ် ၁၅၀၀၀ လောက်ရှိမယ် Charge တိုက်မယ့်လူကို Mark တင်တယ်
ပြီးတော့ Run Speed ပေါင်းပေးတယ် Mark တင်ခံရတဲ့လူကပတ်ပြေးပါ
Boss ဆီတော့ မပြေးနဲ့ ဂွိသွားမယ်
ဒါပြီးရင်ခဏပေးနားတယ် Re-Buff လုပ်
All Ready ပြီဆို စကားပြော လိုက် Leader က ဘေးက NPC ကို Talk
Fourth Boss (Demon)
ထုံးစံအတိုင်း Fear လုပ် ချုပ်ကျွေး
Summon တယ် မပူနဲ့ Main Tank Main Healer ကလွဲလို့ 
Off-Tank က ခေါ် DPS ပေး
Summon ကုန်ရင် Boss ပြန်ချ
Dummy သာသာပဲ Warlock ကအရေးကြီးတယ်နော် Fear မလွတ်စေနဲ့
ဒါပြီးတော့လာတာက Boss မဟုတ်ဘူး
ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေဆင်းလာတာ5ယောက် (Death Knight, Warrior, Priest, Hunter, Rouge)
PvP လိုပဲ Main Tank Off-Tank ကခေါ်
Warrior ကို Fear ပေး Druid ချုပ်
အမုန်းကျွေး စုပြီးချ ကျွန်တော်တို့ ချတာ 1 Minute ပဲ
မျက်လုံးပါပြူးတယ်5ယောက်သွေး 456K ကို
နောက်ထပ် စကားပြောပါ Boss2ကောင် ဖြူမဲညီနောင် ထွက်လာတယ်
Dummy သာသာပဲ Boss Name ကြည့်လို့Unknown ဆို Log-Out ပီးပြန်ဝင်ပါ
Boss မချခင် ကျွန်တော်တို့ တုန်းက အဖြူချတာဆိုတော့ အဖြူလုံးလေးကို
စကားသွားပြော Buff ပေးတယ် အဖြူ Spell Damage လျှော့တဲ့Buff
Priest က အမဲကို Shackle Undead ပေး Tank က အဖြူကို Raid ဆီခေါ်လာ
Fear ပေးချုပ် All DPS ပေးပါ Priest က Shackled Undead ကိုကြည့်ပါ
ကုန်ခံနီးဆိုထပ်ချုပ် ပြီးရင် White ဘက်လာ Heal အဲလိုလုပ်ပါ
အဖြူနဲ့အမဲကို ဝေးဝေးမှာထားပါ မပူးပါစေနဲ့
ပြီးရင် စကားပြောလိုက် Arthas (Lich King) ကြီးထွက်လာ မြေကြီးဓားနဲ့ထိုး
Raid တွေမြေအောက်ရောက်ရော မပူပါနဲ့အောက်မှာရေရှိပါတယ်
ပြီးရင် ရေပေါ်တက် Re-Buff All Ready ဆို
ချီးပိုးထိုး (Final Boss) ဆိုသွား Fear ပေး Druid ချုပ်ရိုက်
Boss သွေးတစ်ဝက်ဆို မြေအောက်ဝင်တယိ (ကြည့်ရင်တော့ မဝင်ဘူး ဒါပေမဲ့
Boss ကိုချလို့ မရဘူး) Summon တယ် ညှောင့်တယ်
Summon ရှင်းပါ မကြမ်းဘူး Summon က ညှောင့်တာတော့ကြမ်းတယ်
ညှောင့်မယ်ဆို Markတင်တယ် ရှောင်ပါ ရေခဲနေတဲ့နေရာမှာ နေ ညှောင့်မခံရဘူး
Turn Evil ရပါတယ် Turn Evil ပေး ချုပ် DPS ပေးပြန်တက်လာရင် ဒါပါပဲ
ကျွန်တော်တို့ တုန်းက မြေကြီးထဲတစ်ခါပဲဝင်ရတယ် Boss
ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါ DPS ပေးတာလောက်တောင်မလောက်ဘူး
Bosses Are Easy If You Know How They Work! Best of Luck My Fellow Buddies!
ExoLounge / How to Change In-Game Font (No AddOns Required)
« Last post by crucidez on December 05, 2012, 07:23:25 am »
WoW ထဲက ကိုယ်မြင်နေကျ Fonts တွေကို ငြီးငွေ့ လာရင် အသစ်အဆန်းလေး ဖြစ်အောင် Font တွေကို Change လို့ ရပါတယ်။
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို တစ်ဆင့်ချင်းပြုလုပ်ပါ။
Step 1 . သင်လို့ ချင်တဲ့ Font ကို အရင်ရှာလိုက်ပါ။ http://www.webpagepublicity.com/free-fonts.html ကိုသွားပြီး Page တစ်ခုချင်းစီမှာ သင်လိုချင်တဲ့ Font ကိုမရမချင်း စိတ်ကြိုက်ရှာလို့ ရပါသည်။ သင်ရှာဖွေပြီးပါက Font အောက်ခြေတွင် ရေးထားသော (.ttf) format link ကို ကို Download လုပ်ရန် နှိပ်ပါ။ ကျတော်အကြံပြုချင်တာက တော့ အခုလောလောဆယ် သင် Download ဆွဲထားသော font များကို သင့် Desktop ပေါ်တွင် သိမ်းထား သင့်ပါသည်။
Step2. သင်ရဲ့ WoW directory ( *\_Program\_World of warcraft) တွင် Right Click နှိပ်ပြီး New Folder ကို ရွေးပြီး Folder အသစ်ပြုလုပ်ပါ။ ထို Folder ပေါ်တွင် Right click နှိပ်ပြီး Rename ဖြင့် Fonts ဟု အမည်ပြောင်းပါ။
Step3. Desktop တွင် သင် Download လုပ်ထားသော font ကို Step2တွင် သင် ပြုလုပ်ထားသော Folder ထဲ သို့ ကူးထည့်ပါ။ ထို Font ကို နောက် ၃ကြိမ်းကူးထည့်ပါ။ စုစုပေါင်း ၄ကြိမ်ဖြစ်သောကြောင့် Fontလေးခု ဖြစ်သွားပါမယ် ဥပမာ သင် Zawgyione Font ကို ကူးထည့်ပါက Fonts folder ထဲတွင်
Step4. သင် ကူးယူထားသော Font ၄ခုကို "ARIALN", "MORPHEUS", "skurri", "FRIZQT__" (underscores နှစ်ခုပါသည်) ဟု တစ်ခု ချင်းဆီကို Rename လုပ်ပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပုံထဲက အတိုင်းဖြစ်နေရမည်။
Font အသစ်များ ပေါ်လာရန်အတွက် သင့် WoW ကို restart ချလိုက်ပါ။
Note 1 - သင့်စက်ထဲရှိ Font များဖြင့်လဲ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည် (C:\_Windows\_Fonts)
Note2- သင် အခုပြုလုပ်ထားသည့် Font ကို ဖျက်ပြီး ပုံမှန် Font သာ ပြန်လိုချင်ပါက WoW directory ထဲရှိ Fonts ဆိုသည့် Folder ကို ပြန်ဖျက်ပါ။